Shir looga arrinsanayo dhamaysirka Sharciga Isgaarsiinta oo ka dhacay Muqdisho: war-saxaafadeed+Sawiro | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shir looga arrinsanayo dhamaysirka Sharciga Isgaarsiinta oo ka dhacay Muqdisho: war-saxaafadeed+Sawiro
Shir looga arrinsanayo dhamaysirka Sharciga Isgaarsiinta oo ka dhacay Muqdisho: war-saxaafadeed+Sawiro
Shir wada tashi ah oo Ku aadan dhamaystirka Sharciga Isgaarsiinta oo u dhaxeeyay kooxda ka shaqaysa xeerka Isgaarsiinta Soomaaliya ee wada hadalka Dowladda iyo Ganacsiga Gaarka ah ayaa maanta ka dhacay Jazeera Palace Hotel ee Magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa furay Wasiir Ku xigeenka wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ee Xukuumadda Soomaaliya Ibraahim Isaaq Yerow, isagoo sheegay in shirka uu yahay mid muhiim oo looga tashanayo dhamaystirka Sharciga Isgaarsiinta dalka kaasi oo uu sheegay inuu marayo heer gebogebo ah.
Qareenka Xukuumadda Cismaan Guulleed oo shirka isaganu ka hadlay ayaa sheegay in la aruuriyay dhammaan nuqulada xeerkan ismarkaana lagu soo koobay hal Nuqul.
Waxaa uu sheegay in meel gebogebo ah uu marayo Islamarkana marka uu soo dhamaado wadatashiga haatan socda in loo gudbin doonno Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Soomaaliya, ka dibna Baarlamaanka loo gudbin Donno marka ay ansaxiyaana loo gudbin Donno Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo.
Halkan Hoose ka akhriso war-saxaafadeedka laga soo saaray shirka
KULANKA KOOXDA KA SHAQAYSA XEERKA ISGAARSIINTA SOOMAALIYA EE WADA HADALKA U DHAXEEYA DOWLADDA IYO GANACSIGA GAARKA ah.
Mogadishu, May 21, 2017 : Iyadoo la tixraacayo go’aamadii ay sida wadajirka ah iskugu afgarteen dowladda iyo ganacsatada gaarka ah ee shirkii lagu qabtay magalada London bishan ,waxaa la isla ogalaaday in shir lagu qabto Hotel Jazeera Place ee magaalada Mugadishu maalinta Axadda 21 May 2017-ka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka sheegay shirkii London in maamulkiisu uu qaadi doono talaabooyin lataaban karo oo lagu hormarinayo jawiga ganacsiga , Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda taas oo asaas u ah kobaca dhaqaalaha.
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu intaasi raaciyey “Taasi waa sababta ay muhiim ah ugu noqotay dadkeenna in lahelo wada xaajood xukuumadda iyo ganacsiga gaarka ah si mustaqbalka loo gaarsiyo barwaaqo iyo nabadgalyo”.
Wasiirka Wasaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda Mudane Cabdi Canshuur Xasan, ayaa isagoo ka hadlaya munaasabad lagu soo gabagabaynayey siminaar afar maalmood socday oo kor loogu qaadayey tayada shaqaalaha wasaaradda qaybaha qandaraasyada iyo maaliyadda oo uu gacan kageystay maalgelintiisa Bangiga Adduunka qaybtiisa ka shaqaysa Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda, ayaa waxaa uu wasiirku carabka ku adkeeyey , baahida loo qabo tayeynta iyo kor u qaadista dhanka Teknoollajiyadda.
Wasiirku waxaa uu intaasi ku daray, in dhibaato ay ka jirto hirgelinta xeerka.
Isaga oo intaasi sii raaciyey “Waxaan u baahannahay in lahubiyo casharadii laga soo bartay howlihii hore loo soo qabtay si howshaan loogu fuliyo si xamaasad leh ”.
Waxaa shirka guddoomiyey Agaasimaha guud ee wasaradda Boostadda, Isgaarsinata iyo Teknoolajiyadda Mudane Axmed Daljir, waxana la shir gudoominaya Mudane Ali Adawe oo kasocda ganacsiga gaarka ah.
Waxaa gacan ka geystey Shirka kooxda ka shaqaysa Warbaahinta, Isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda oo uu horkacayo Lataliye Sare Cabdirashiid M. Cabdi oo ah oo qayb ka ah mashruuca dib u eegayo maalgashiga Soomaaliya ee Bangiga Adduunka.
Shirkadaha Isgaarsiinta Telfoonada gacanta ee Soomaaliya ayaa ah kuwo samaynaya horumar si joogto ah marka loo eego dhanka waddamada deriska ah sida Djibuuti, Ereteriya iyo Itoobiya oo iyagu xakameeya isticmaalayaasha telfoonada gacanta . Hasa-yeeshee xukuumadda iyo ganacsatada gaarka ah ayaa hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in lahelo sharciyo lagu xakameeyo isgaarsinta si kor loogu qaado kobaca ganacsiga.
Xasus: Tixraacan aad ku aragtid kor ayaa muujinaya sida dalalka kuxusan ay uga shaqeyaan Mobilka gacanta. ( Isha xogtaan) Bangiga Addunka warbinittisa 2016.
Tan ayaa ah fursad muhiim ah oo sare loogu qaadayo dhanka xeer u sameynta warbaahinta, isgaarsiinta iyo teknooliyadda, iyadoo ay qayb ka tahay xeerka Isgaarsiinta ee heer qaran ee Soomaaliya oo haatan gacanta lagu hayo.
Kulanka ayaa waxaa uu ahaa mid lagu falanqeeyey isbaddalada ay soo jeedisay qaybta warbaahinta, Isgaarsiinta iyo Teknoolajiyadda ee Wasaarada Boostada iyo Isgaarsiinta, taas oo dib u eegid loogu samaynayey xeerka Isgaarsiinta dalka oo ay siwadajir ah u diyaarinayaan Dowladda iyo Ganacsiga gaarka ah, kaas oo lagu qorayo sharciga ku meelgaarka ah ee Isgaarsiinta, iyadoo looga gol leyahay in lagu abuuro sidii loogu guulaysan lahaa in lasameeyo jawi ganacsi oo suurta gal ah ee Soomaaliya.
WIXII FAAH FAAHIN DHEERAADA KALA XIRIIR;
Senior Advisor — Abdirashid Mohamed Abdi
Previous articleAfrican Union trains Somali security sector actors on deterrence of use child soldiers in conflict
Next articleAkhriso Muhiimadda hadaladii Trump iyo Boqorka Sacuudiga ay ka jeediyeen shirka Riyadh